URAMAPHOSA UNIKEZA ININGIZIMU AFRIKA IMIGOMO | Scrolla Izindaba
URAMAPHOSA UNIKEZA ININGIZIMU AFRIKA IMIGOMO
UMengameli uCyril Ramaphosa unikeze ithemba elisha ngemithi yokugoma ye-Covid, ethembisa ukuthi inqwaba yokuqala yemithamo eyizigidi ezingama-20 isendleleni.
Isimemezelo sikaRamaphosa sangoMsombuluko ebusuku – ebesihlanganisa izindlela ezinzima zomvalelo nokuvalwa kwemingcele yomhlaba – kulandela izinsolo zochwepheshe zokuthi uhulumeni wenze okuncane kakhulu.
UMengameli akazange anabe ngemininingwane yokutholakala kwemithi yokugoma, ngaphandle kokuthi athi “kunezingxoxo ezimbalwa ezethembisayo nabakhiqizi abaningi abahlukahlukene okusadingeka ukuthi ziphothulwe. Kuze kube manje sithole imithamo eyizigidi ezingama-20 ezothunyelwa ikakhulukazi engxenyeni yokuqala yonyaka”.
URamaphosa uthe iNingizimu Afrika ithola imijovo yokugoma ngokuqondile kubakhiqizi abanjengalaba, kanye nalaba:
● uhlelo lwe-COVAX lomhlaba jikelele, oluzonikeza imigomo kubantu abayi-10% baseNingizimu Afrika, futhi
● Ithimba Le-African Union Lokutholwa Komuthi Wokugomela i-Afrika ukuthola imithamo yokugoma yezwekazi.
“Sizokwenza imigomo ngezibhedlela, imitholampilo, izinsizakalo zokufinyelela kubantu kanye nemitholampilo engomahamba nendlwana, nezindawo ezizimele njengamahhovisi odokotela, amakhemisi nezindawo zokusebenza.”
Kusenezinselelo eziningi ekukhishweni komuthi wokugoma, kufaka phakathi ama-anti-vaxxers amaningi.
Kude nezindaba ezinhle ngemithi yokugoma, uRamaphosa uxwayise ukuthi ubhubhane ludlange kakhulu selokhu lwaqala futhi imigomo yomvalelo kufanele ibe nzima nakakhulu.
Uhulumeni uvala ukuwela imingcele yomhlaba engama-20 (ngaphandle kokukhishwa okufana nokuhweba) kufaka phakathi i-Beitbridge, okuyisango elikhulu eliya e-Zimbabwe.
Khonamanjalo, iNingizimu Afrika izoqhubeka nokuhlala isezingeni lesithathu. Lokhu kusho ukuthi:
● Iningi lemibuthano yangaphakathi nangaphandle ayivunyelwe. “Njengakuqala, lokhu akubandakanyi imingcwabo nokunye okulinganiselwe njengoba kuchaziwe emithethweni, njengezindawo zokudlela, iminyuziyamu kanye nezindawo zokuzivocavoca umzimba”
● Imingcwabo – abantu abaphezulu kwabangu-50
● isikhathi esibekiwe sokubuyela emakhaya ngo-9 ebusuku kuya ku-5 ekuseni
● ukufakwa kwezifonyo
● Ukuthengiswa kotshwala kuvinjelwe
● “Onke amabhishi, amadamu, amachibi, imifula, amapaki omphakathi kanye namachibi okubhukuda omphakathi ezindaweni ezinezindawo ezishisayo kuzovalelwa umphakathi.
Njengakuqala izingadi zezitshalo, amapaki kazwelonke namanye amapaki lapho izindlela zokulawula ezifinyelela ekulinganisweni kokungena obekuvele kukhona kuzohlala kuvulekele umphakathi.”